Ku soodhawaada waxbarashada dadka waa weyn ee asaasiga ah Waxbarashada asaasiga dadka waa weyn ee Central Minnesota (ABE) waxaan dadka waaweyn ku caawinaa si ay u noqdaan kuwa si buuxda uga qeybqaata bulshadeena, shaqsiyadoodana iskugu filnaada. Central MN ABE waa iskaashi goboleed u dhexeeya 16-ka degmo ee Iskuulada, oo ay ku jirto degmada 742. Bartayaasha dadka waaweyn ee bulshadaan ayaa waxaan si hufan loogu adeegaa goobaha waxbarasho waqtiyada maalinta lagujiro iyo saacadaha fasallada fiidki sannadka oo dhan. Central Minnesota ABE waxay soo dhaweeyneeysaa dhammaan dadka waaweyn oo dhan, 17 ama wixi kaweyn, oo aan hadda ka diiwaangashaneyn barnaamijka waxbarashada ee joogtada ah.
Casharada ama fasallada lagubarto wadaninimada waxay kulmaan maalmaha jimcooyinka lagabilaabo 10am ilaa 12pm Iskuulka Discovery Community School, ee ku yaala Waite Park.
Loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha labadaba ayaa ka faa'iidaya xirfadaha aasaasiga ah ee siyaadada ah ee goobta shaqada. Wixii macluumaad dheeraad ah wac lambarka ah: 320-529-6500 , ext . 6211 , ama noogalasoo xidhiidh Ciwaanka ah: abe@isd742.org.